7 Cách làm sữa hạt điều thơm ngon Không Bị Tách Nước | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: 7 Cách làm sữa hạt điều thơm ngon Không Bị Tách Nước | Muasalebang in Muasalebang
Ezinyangeni eziyisi-9 ezedlule –
Ubisi lwe-cashew olumnandi futhi olunomsoco luhlala luyisiphuzo esiyintandokazi yabo bonke ubudala. Inhlanganisela yama-cashews nezinye izithako zemvelo kuthuthukisa ukunambitheka okumnandi nokuqukethwe okunomsoco okubalulekile. Ake sithole noNguyen Kim khona manjalo izindlela eziyi-7 zokwenza ubisi lwe-cashew olumnandi, olungahlukanisiwe futhi olulungele impilo ngokwedlulele!
1 Ukusetshenziswa kobisi lwe-cashew
2 Ingabe ama-cashews athosiwe angenza ubisi?
3 Luxube ngani ubisi lwe-cashew?
4 Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew ngomshini
4.1 Izithako zokupheka ubisi lwe-cashew ngomshini wobisi lwamantongomane
4.2 Izinyathelo zokupheka ubisi lwe-cashew nge-nut milk maker
5 Amaresiphi angu-7 okwenza ubisi lwe-cashew olujwayelekile kakhulu nge-blender
5.1 1. Indlela yokwenza ubisi lwendabuko lwe-cashew
5.1.2 Imiyalo enemininingwane yokuthi ungenziwa kanjani ubisi lwendabuko lwe-cashew
5.2 2. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew shake i-vanilla, uju
5.2.2 Iziyalezo zendlela yokwenza
5.3 3. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew olugazingiwe nge-macadamia
5.3.2 Iziyalezo zendlela yokwenza
5.4 4. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew, i-sesame emnyama
5.4.2 Imiyalo enemininingwane yokuthi ungayenza kanjani ubisi lwe-cashew – i-sesame emnyama
5.5 5. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew kashokoledi omnandi
5.5.2 Imiyalo enemininingwane yokuthi ulenza kanjani ubisi lwe-cashew olunambitheka ushokoledi
5.6 6. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew – ukugcwaliswa kwamathanga
5.6.2 Iziyalezo zendlela yokwenza
5.7 7. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew ngama-walnuts
5.7.2 Iziyalezo zendlela yokwenza
6 Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nokwenza ubisi lwe-cashew olugazingiwe, olusha ekhaya
6.1 Ingabe ama-cashews athosiwe angenza ubisi?
6.2 Yini emnandi ehlanganiswe nobisi lwe-cashew?
Ukusetshenziswa kobisi lwe-cashew
Ama-cashews awagcini nje ngokunambitha okunamafutha okumnandi. Kodwa ngaphakathi acebile ku-lutein, i-magnesium, uvithamini K, i-phosphorus, i-calcium, ama-antioxidants, … Ngakho-ke, lapho usebenzisa ama-cashews ukupheka ubisi, ngokusobala azoba isiphuzo esimnandi.
Gcina isisindo esinempilo.
Yehlisa i-cholesterol embi, elungele inhliziyo.
Gcina isikhumba esinempilo, amathambo namazinyo.
Vimbela umdlavuza, isifo se-gallstone ngempumelelo.
Ingabe ama-cashews athosiwe angenza ubisi?
Ama-cashews amasha nama-cashews agazingiwe kokubili enza ubisi. Uhlobo ngalunye lwama-cashews amasha kanye nama-cashews agazisiwe luzoletha ukunambitheka okuhlukile.
Ubisi olusha lwe-cashew: izoba nokunambitheka okupholile, okunamafutha.
Ubisi lwe-cashew olugazingiwe: izoba nokunambitheka okukhuluphele kunama-cashews amasha. Ngaphezu kwalokho, ubisi luphinde lube lukhulu futhi lukhudlwana kunama-cashews amasha.
Ngakho-ke, uma uthanda amafutha amaningi, khona-ke ubisi lwe-cashew olugazingiwe luyikhandidethi elihle. Ngezinsuku lapho ukunambitheka kusha futhi kuvinjelwe, usebenzisa ubisi olusha lwe-cashew.
Luxube ngani ubisi lwe-cashew?
Ukwenza ubisi olumnandi lwe-cashew, kufanele unake ukupheka Ubisi lwe-cashew oluxubene namantongomane Imithetho efanele yokuhlanganisa imi kanje:
Amantongomane angadingi kuphekwa ayahlangana
Imbewu idinga ukuphekwa ndawonye
Imbewu i-viscous futhi i-viscous nomunye nomunye. Isibonelo: ubisi lwe-almond cashew, ubisi lwe-lotus seed cashew,…
Izinhlayiya zifakwe kwenye. Isibonelo: ubisi lwesame omnyama wamabele
Khulisa ukufana kobisi lwamantongomane lapho uhlanganisa ama-granules ukuze udale impushana. Isibonelo: ithanga elimnyama lesesame ubisi,…
Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew ngomshini
Umshini wokwenza ubisi lwamantongomane Kuzokusiza ukupheka ubisi lwe-cashew ngokushesha okukhulu ngesinyathelo esisodwa nje. Akudingeki ukuthi wenze isinyathelo ngasinye sokushisisa, sokuhlanza nokushisisa nhlobo. Vele ubeke ama-cashews amasha noma ama-cashews okugazingiwe odakeni, umenzi wobisi lwentongomane uzokuhlanza ngokuzenzakalelayo futhi apheke ubisi ngokushesha.
Izithako zokupheka ubisi lwe-cashew ngomshini wobisi lwamantongomane
150 g ama-cashews amasha noma athosiwe
850ml amanzi ahlungiwe.
100 g ushukela we-rock.
Izinyathelo zokupheka ubisi lwe-cashew nge-nut milk maker
Hlanza ama-cashews amasha bese uwageza ngamanzi anosawoti ahlanjululwe.
Gcoba ama-cashews amasha emanzini afudumele amahora angu-2-3 kuze kube lula. Ama-cashews athambile azokwenza ubisi lube bushelelezi futhi lukhuluphale.
Faka wonke ama-cashews amasha noma ama-cashews athosiwe kumenzi wobisi wamantongomane
Cindezela inkinobho ethi “VULA” bese ukhetha umsebenzi wokupheka ofanele. Ngama-cashews amasha, ukhetha umsebenzi wokupheka ubisi, kuyilapho ama-cashews athosiwe akhetha umsebenzi “Ubisi olungaphekiwe”. Lo msebenzi usiza ukugcina imisoco kawoyela kuma-cashews osiwe
Umenzi wobisi wamantongomane uzocwenga ngokuzenzakalelayo futhi apheke ubisi lwamantongomane. Ngokuya ngomsebenzi, cishe imizuzu eyi-10-25 uzoba nenkomishi emnandi yobisi lwe-cashew olusha/ogazingiwe ukuze ujabulele.
Amaresiphi angu-7 okwenza ubisi lwe-cashew olujwayelekile kakhulu nge-blender
Lapha, u-Nguyen Kim uzofingqa izindlela zokupheka indlela yokwenza ubisi lwamantongomane Izinto ezimnandi zamahhala zokukusiza ukuthi unakekele impilo yomndeni wakho.
1. Indlela yokwenza ubisi lwendabuko lwe-cashew
150 g ama-cashews amasha.
Imiyalo enemininingwane yokuthi ungenziwa kanjani ubisi lwendabuko lwe-cashew
Isinyathelo 1. Geza ama-cashews amasha kahle ngamanzi anosawoti ahlanjululwe bese uwageza futhi ngamanzi avamile. Bese, cwilisa ama-cashews emanzini afudumele amahora angu-2-3 bese uthela ama-cashews kubhasikidi ukuze akhiphe.
Isinyathelo sesi-2. Letha ama-cashews amasha alungisiwe ku-steam cishe imizuzu engama-20-30.
Isinyathelo sesi-3. Ubilise u-850ml wamanzi ahlungiwe alungisiwe kwenye ibhodwe. Linda ukuthi amanzi aqale ukubila, bese ufaka ushukela we-rock bese ugoqa kuze kube yilapho ushukela uhlakazeka ngokuphelele, bese uvala ukushisa.
Isinyathelo sesi-4. Faka ama-cashews ane-steamed noshukela ophekiwe embizeni ye-blender. Qala umshini ukuze uhlanze ingxube.
Isinyathelo sesi-5. Sebenzisa isisefo ukuhlunga okusele, bese uthela ubisi lwe-cashew engilazini futhi ujabulele. Ubisi lucebile ngamafutha, ukunambitheka okumnandi kwamantongomane e-cashew. Kanye nokungaxutshwa namanye ama-flavour azokwenza ukuthi uthande!
2. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew shake i-vanilla, uju
200 g ama-cashews amasha ahlutshiwe.
700ml amanzi ahlungiwe.
2 wezipuni uju oluluhlaza.
2 – 3 wezipuni ze-vanilla extract.
½ ithisipuni kasawoti.
Iziyalezo zendlela yokwenza
Isinyathelo 1. Gcoba ama-cashews ahlutshiwe emanzini afudumele amahora angu-2-3 ukuze athambe. Khipha ukuze wome.
Isinyathelo sesi-2. I-Puree, ama-cashews afakwe kahle nenani lamanzi ahlungiwe alungisiwe.
Isinyathelo sesi-3. Sebenzisa isikhwama sokuhlunga ukuze ukhiphe insalela ukukhipha ubisi. Shisisa le ngxube esitofini ekushiseni okuphansi. Uma ingxube ibilisa, engeza zonke izithako ezisele. Qhubeka ubilisa ingxube cishe imizuzu eyi-10, bese uvala ukushisa. Ngesikhathi ubila, kufanele ugovuze kahle ukugwema ukushisa ubisi ngenxa yenhlabathi.
Isinyathelo sesi-4. Linda ukuthi ubisi luqale ukupholisa, bese uthela umkhiqizo oqediwe embizeni yengilazi. Vala uqinise futhi ugcine esiqandisini kuze kube yizinsuku ezi-3. Ngaso sonke isikhathi uma uyisebenzisa, uthele ubisi engilazini bese uyinyakazisa kancane ngaphambi kokuphuza.
3. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew olugazingiwe nge-macadamia
200 g ama-cashews athosiwe.
70 g amantongomane e-macadamia.
1.2 amalitha amanzi.
5 amaphilisi ama-jaggery amancane.
Izinhlamvu ezingu-3-5 zikasawoti wetafula.
Isinyathelo 1. Hlanza usilika wangaphandle wama-cashews othosiwe. Geza bese ucwilisa lawa ma-cashews emanzini afudumele amahora angu-2-3. Susa imbewu futhi uyeke yome.
Isinyathelo sesi-2. Thela amantongomane e-macadamia kubhasikidi, hlambulula ngamanzi abilayo bese ukhipha.
Isinyathelo sesi-3. Shisisa amalitha angu-1.2 amanzi ku-70°C – 80°C.
Isinyathelo sesi-4. Faka ama-cashews namantongomane e-macadamia ku-blender. Faka amanzi ashisayo asanda kuphekwa, i-jaggery nosawoti. Qala umshini ukuze uqale ukuhlanganisa, lapho ingxube ihlanzekile ngokuphelele, cisha umshini.
Isinyathelo sesi-5. Thela ubisi olusele engilazini futhi ujabulele. Uma ubisi lwe-cashew – i-macadamia ingemnandi ngokwanele, ungangeza ushukela omncane bese uvuselela kahle.
4. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew, i-sesame emnyama
250 g ama-cashews amasha.
I-100 g ye-sesame emnyama.
Imiyalo enemininingwane yokuthi ungayenza kanjani ubisi lwe-cashew – i-sesame emnyama
Isinyathelo 1. Geza bese ucwilisa ama-cashews amasha bese ucwilisa emanzini afudumele amahora angu-2-3. Faka i-sesame emnyama endishini yengilazi bese ucwilisa emanzini afudumele cishe amahora angu-6-8. Uma usebenzisa unamathisela omnyama wesesame ukupheka, lesi sinyathelo sizokhishwa.
Isinyathelo sesi-2. Hlanza ama-cashews ngesesame emnyama ngamanzi ahlanzekile bese uthela kubhasikidi ukuze ukhiphe.
Isinyathelo sesi-3. Hlanza izithako ezingenhla ezi-2 ngamanzi. Sebenzisa isikhwama sokuhlunga ukuhlunga okusele futhi uthole ingxube yejusi kabhontshisi. Qaphela ukuthi kufanele usebenzise amandla aqinile ukuze ukhame ijusi kabhontshisi.
Isinyathelo sesi-4. Shisisa ingxube yejusi kabhontshisi esitofini endaweni yokushisa ephansi kakhulu. Faka uju ugovuze kahle. Uma ingxube ibilisa, pheka cishe imizuzu emi-5, bese ucisha ukushisa.
Isinyathelo sesi-5. Thela umkhiqizo wobisi lwe-cashew ophelile futhi ujabulele. Ubisi lwe-cashew – i-sesame emnyama izoba mnandi kakhulu uma ithathwa kubanda.
5. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew kashokoledi omnandi
20 g ushokoledi omnyama ohlanzekile.
50 g ubisi oluncibilikisiwe olunoshukela.
Imiyalo enemininingwane yokuthi ulenza kanjani ubisi lwe-cashew olunambitheka ushokoledi
Isinyathelo 1. Geza bese ucwilisa ama-cashews emanzini afudumele amahora angu-2-3 ukuze athambe ngokuphelele. Khipha ama-cashews futhi ukhiphe usilika wangaphandle, qhubeka ugeza imbewu futhi uyomise.
Isinyathelo sesi-2. I-Puree efakwe ama-cashews ngamanzi ahlungiwe alungisiwe.
Isinyathelo sesi-3. Sebenzisa isisefo sensimbi engagqwali enezimbobo ezincane ukuze ususe okusele.
Isinyathelo sesi-4. Faka ijusi elihlungiwe ebhodweni lensimbi engagqwali bese ulethe ngamathumba phezu kokushisa okuphansi. Uma ubisi luqala ukubila, faka ushokoledi nobisi olujiyile bese ugovuza luze luncibilike, bese uvala ukushisa.
Isinyathelo sesi-5. Lindela ubisi lwe-cashew olunambitheka ushokoledi ukuthi luphole ngokuphelele, bese uthele engilazini bese uqala ukujabulela.
6. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew – ukugcwaliswa kwamathanga
100 g ama-cashews amasha.
100 g ithanga.
50 g ushukela we-rock.
½ isipuni se-vanilla powder.
1 ithisipuni isinamoni powder.
1 ilitha lamanzi ahlungiwe.
Isinyathelo 1. Geza bese ucwilisa ama-cashews emanzini afudumele amahora angu-2-3. Khipha ukuze wome.
Isinyathelo sesi-2. Sebenzisa ummese ukuze ucwebe futhi usike ithanga, bese ugeza ngamanzi futhi ukhiphe.
Isinyathelo sesi-3. Faka ama-cashews, ithanga ngamanzi ahlungiwe ku-blender bese u-puree.
Isinyathelo sesi-4. Faka ingxube esikhwameni sokuhlunga, sebenzisa izandla zakho ukuze ucindezele ngamandla ukuhlunga insalela yobisi.
Isinyathelo sesi-5. Faka ijusi yobisi ebhodweni lensimbi engagqwali bese ulethe ngamathumba ngokushisa okuphansi. Uma ubisi luqala ukubila, faka ezinye izithako futhi ugovuze kuze kuncibilike. Pheka ingxube cishe imizuzu eyi-10, bese uvala ukushisa.
Isinyathelo sesi-6. Lindela ubisi lwe-cashew kanye nethanga kuphole, bese uthele ebhodleleni bese ugcine esiqandisini. Uma uphuza, uthatha isilinganiso esifanele, gwema ukushiya ubisi emoyeni isikhathi eside, okubangela ukubola kobisi. Futhi kufanele isetshenziswe zingakapheli izinsuku ezi-4 ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi engcono kakhulu nokunambitha.
7. Indlela yokwenza ubisi lwe-cashew ngama-walnuts
50 g ushukela granulated.
1 ilitha lamanzi.
Isinyathelo 1. Ama-cashews ahlanzwa, acwiliswe emanzini afudumele cishe amahora angu-2-3. Susa ama-cashews bese ususa igobolondo langaphandle likasilika.
Isinyathelo sesi-2. I-Walnut igobolondo, i-cored. Bese ucwilisa izinhlamvu emanzini afudumele cishe imizuzu engu-20-30 ukuze ususe ifilimu encane ngaphandle kwe-kernel.
Isinyathelo sesi-3. Hlanza ama-cashews nama-walnuts ngamanzi abandayo, bese uwathela kubhasikidi ukuze ukhiphe.
Isinyathelo sesi-4. Hlanza le ngxube yembewu ngama-200ml wamanzi ahlungiwe. Thela ingxube esikhwameni sokuhlunga bese ucindezela ngamandla ukuze ukhiphe ijusi.
Isinyathelo sesi-5. Bilisa ijusi yale ngxube yembewu ngamanzi asele angama-800ml. Uma ubisi luqala ukubila, engeza i-vanilla, ushukela ohlutshiwe futhi uqhubeke ubilisa cishe imizuzu eyi-10, bese uvala ukushisa. Qaphela ukuthi kufanele kuphekwe ekushiseni okuphansi. Futhi njalo uvuse ngezandla zakho ngenkathi ubila ukuze ubisi lungashi.
Isinyathelo sesi-6. Vumela ubisi lupholile ngokuphelele bese uthele embizeni, faka esiqandisini futhi ujabulele kancane kancane.
Ngezindlela eziyi-7 zokwenza ubisi lwe-cashew olujwayelekile, olumnandi futhi olulula kakhulu olubalwe ngenhla, ngikufisela impumelelo ekucubunguleni!
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nokwenza ubisi lwe-cashew olugazingiwe, olusha ekhaya
Sawubona, ama-cashews amasha nama-cashews agazingiwe angapheka kokubili ngobisi. Ngobisi oluvela ku-cashews ogazingiwe, luzoba nokunambitheka okunephunga elimnandi kanye nokuthungwa okubushelelezi, okukhilimu. Ungazama indlela yokwenza ubisi lwe-cashew olugazingiwe nge-macadamia kulesi sihloko esimnandi kakhulu.
Yini emnandi ehlanganiswe nobisi lwe-cashew?
Sawubona, ungakwazi ukuxuba ubisi lwe-cashew noju, amantongomane e-macadamia, ama-walnuts, ithanga, ushokoledi, … okumnandi kakhulu. Ukupheka lezi zitsha zobisi lwe-cashew, ungabhekisela esihlokweni.